မြန်မာသံရုံး၊ မနီလာမြို့မှ (၇၂)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်အနားအား ကျင်းပခြင်း – Ministry of Foreign Affairs
မြန်မာသံရုံး၊ မနီလာမြို့မှ (၇၂)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်အနားအား ကျင်းပခြင်း
(၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက်၊ မနီလာမြို့)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးလွင်ဦးနှင့် ဇနီးတို့ ကြီးမှူး၍ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၉) ရက်နေ့တွင် မနီလာမြို့ရှိ Diamond Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခဲ့ပါသည်။
ယင်းအခမ်းအနားသို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Secretary of Defence H.E. Mr. Delfin N. Lorenzana ၊ နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှ Undersecretary of Department of Foreign Affairs H.E. Mr. Enrique Manalo ၊ မနီလာမြို့အခြေစိုက်သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ စစ်သံမှူးများ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဌာနနှင့် အခြားဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာပညာတော်သင်များ၊ Philippine-Myanmar Christian Fellowship (PMCF)မှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရောက် မြန်မာမိသားစုများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ စုစုပေါင်း (၂၀၀) ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် အထူးဧည့်သည်တော် နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှ Undersecretary of Department of Foreign Affairs H.E. Mr. Enrique Manalo နှင့် သံအမတ်ကြီး ဦးလွင်ဦးတို့မှ နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကားပြောကြားကြပါသည်။
ထို့နောက် ကြွရောက်လာသော ဧည့်ပရိတ်သတ်များအား အစားအသောက်များဖြင့် တည်ခင်းကျွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ University of Philippine Los Banos (UPLB) မှ ကျောင်းသား/သူများနှင့် Philippine-Myanmar Christian Fellowship (PMCF) မှ အဖွဲ့ဝင်များက မြန်မာအကများဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။